» www.Time.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.newsweek.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.ap.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.NYTime.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.googlenews.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.afp.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.yahoonews.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.CNN.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.bbc.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.Guardian.co.uk ဂါးဒီယန်းသတင်းစာ၏ဝက်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်
» www.nationmultimedia.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.chanmelnewsasia.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.USatoday.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.Xinhuanet.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.reuters.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www. azp.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.ap.org ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.warshingtonpost.com ကမ္ဘာ့သတင်းများကြည့်နိုင်သည်။
» www.popurls.com နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်ပေါ်ပြူလာတင်းများဝက်ဆိုက်
» www.slate.com ဝေါရှင်တန်ပို့ရဲ့ဆိုက်
» www.guerrillanews.com ကမ္ဘာသတင်းဆိုင်ရာခေါင်းကြီးပိုင်း၊ဗီဒီယို၊ဘလော့ဂ်
» www.wikileaks.org ခိုင်လုံသောလူသိမခံသောသတင်းမျိုးစုံကိုအမည်
» www.oddee.com ကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးအဆန်းဆုံး၊သတင်း၊ပစ္စည်း၊ဖြစ်ရပ်၊
» www.manybooks.net ကမ္ကာ့နာမည်ကျော် ဝတ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ e.book များ
» www.amazone.com စာအုပ်များ သီချင်းများ၊အွန်လိုင်းစွယ်စုံစတိုးဆိုက်ပါ။
» www.books-hive.com မြန်မာစာအုပ်များနှင့်ebookများရှာဖွေကြည့်နိုင်တဲ့
» www.mmproverb.com မြန်မာစကားပုံတွေကိုဖေါ်ပြထားတဲ့ဆိုက်ပါ
» www.dailylit.com အွန်လိုင်းပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်မျိုးစုံဖတ်လို့ရတဲ့ဆိုက်
» www.onlinItreader.com မြန်မာITစာအုပ်များ
» www.elibrary.com.mm မြန်မာအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်ဝက်ဆိုက်တစ်ခုပါ
» www.foreverspace.com.mm မြန်မာစာအုပ်များ
» www.brainteaserworld.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.coolfunnyjokes.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.funbrain.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.funschool.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.unclefred.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.cartonnetwork.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.cartoons.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.markfiore.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.comedycentral.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.showyoufriends.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.funnypostcard.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.glasbergen.com ဟာသနှင့်ကာတွန်းဝက်ဆိုက်
» www.greekartoon.gr ဂရိုကာတွန်းများဖော်ပြထားပါတယ်
» www.cartoonbank.com နယူးယောက်မဂ္ဂဇင်းမှကာတွန်းများစုစည်းထားသော
» www.allthezun.com ဟာသများပါသောဆိုက်
» www.markziore.com animationများ
» www.keytoon.com animationများ
» www.Lu Lu.com
» www.soemin.net မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း နှင့် မြန်မာဆိုရိုး
» www.myanmarinternetjournal.com အင်တာနက်ဂျာနယ်ရဲ့ဝက်ဆိုက်ပါ
» www.Timetotimeonline.com Time to timeဂျာနယ်ရဲ့ဝက်ဆိုက်ပါ။
» www.first-11.com အားကစားဂျာနယ် Eleven Media Group ဆိုက်ပါ
» www.Pcmag.com ကမ္ဘာ့ pc မဂ္ဂဇင်းဆိုက်ပါ
» www.khitlunge.net ခေတ်လူငယ်ဝက်ဆိုက်
» www.enjoy.net.mm ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သောမြန်မာဝက်ဆိုက်
» www.Myanmar-music.com မြန်မာသီချင်း၊သတင်း၊ရုပ်ရှင်၊ပါတဲ့ဆိုက်
» www.planet.com.mm မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ potral ဝက်ဆိုက်
» www.nativemyanmar.net ကဏ္ဍစုံပါတဲ့မြန်မာဝက်ဆိုက်
» www.mysteryzillion.com ကဏ္ဍစုံပါတဲ့မြန်မာဝက်ဆိုက်
» www.mmmusicbox.blogspot.com မြန်မာသီချင်းများ
» www.apytzmedia.net မြန်မာသီချင်းများ
» www.myanmarsongs.net မြန်မာသီချင်းများ
» www.myanmarmp3album.com မြန်မာသီချင်းများ
» www.songza.com အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေမျိုးစုံရှိတဲ့ site
» www.pianostreet.com စန္ဒယားဦးစားပေး ဂီတ site
» www.emp3world.com နိုင်ငံတကာ mp3သီချင်းများအခမဲ့ရနိုင်သောဆိုက်
» www.Musicovery.com တေးဂီတဆိုင်ရာဆိုက်ပါ
» www.MP3.DOREMIXY.com MP3တွေကိုအခမဲ့ရနိုင်တဲ့သီးချင်းဆိုက်
» www. Mp3.com mp3/mp4 သီချင်းတွေယူလို့ရတဲ့ဆိုက်
» www. Lyricdirectory.net အင်္ဂလိပ်သီချင်းစာသားသင်္ကေတများရနိုင်သောဆိုက်
» www.bearshare.com အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကြိုက်သလောက်ယူနိုင်တဲ့ဆိုက်
» www.onlineradiostations.com အွန်လိုင်းမှရေဒီယိုနှင့်သီချင်းနားဆင်နိုင်သောဆိုက်
» www.KnewYourMeme.com ရုပ်ရှင်၊အသံ၊ပုံများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှယ်ရာ
» www.karaokeparty.com onlineပေါ်မှာကာရာအိုကေဆိုလို့ရမယ့် site
» www.music.com နိုင်ငံတကာနာမည်ကြီးသီချင်းတွေနားဆင်နိုင်ပြီးမိမိ
ကိုယ်ပိုင် Radio Stations ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
» www. LoopLabs.com အွန်လိုင်းမှ Remixနှင့်DJသီချင်းများအလွယ်တကူ
» www.ilike.com ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်နဲ့သည်ဝက်ဆိုက်မှာ
» www.mrtv-4 net.mm MRTV-4နှင့်ဆက်စပ်ရုပ်သံလိုင်းများအင်တာနက်
» www.imdb.com ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသတင်းအချက်
အလက်ဖော်ပြထားတဲ့ website ဝက်ဆိုက်
» www.remlap.com MP-3မျိုးစုံစီမံဖန်တီးပြီး၊MP-3သီချင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ
သီဆိုသူနာမည်တွေမှာပါတဲ့ keyword တွေ
» rockhall.com ရော့ခ်ဂီတနဲ့ပက်သက်ပြီးအမှတ်တရရုပ်ပုံတွေ၊အသံ
» www.mp3realm.org သီချင်းတွေကိုစာသားရိုက်ပြီးရှာဖွေလို့ရတဲ့ သီချင်း
» www.fearnet.com သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်အသစ်ပေါင်းစုံ
» www.imvite.com တီဗီစတေရှင်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်ကအကြောင်း
» www.Hulu.com အခမဲ့တီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုအဆင့်မြင့်အရည်အသွေး
» www.foratv.com မိမိရိုက်ထားသောဗီဒီယိုများကိုရှယ်ရာပေးတင်နိုင်
» www.Nefflix.com အွန်လိုင်းပေါ်မှဗီဒီယိုခွေအငှားဆိုက်
» www.hollywood.com နောက်ဆုံးထွက် ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို၊တီဗီအစီအစဉ်နှင့်
» www.The-movie-times.com ကမ္ဘာပေါ်ကထွက်သမျှ ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယိုတွေအကြောင်း
» www. imdb.com ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတေးသီးချင်းတွေကြည့်နိုင်တဲ့ဆိုက်
» www.academy.myanmarcgiaward.com မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» www.hyun-bin.co.kr ကိုရီးယားမင်သားဟိုင်ဘင်ရဲ့ဆိုက်
» www.seungheon.com ကိုရီးယားမင်းသားကဂျွန်စောရဲ့ဆိုက်ပါ
» www.Kuhyesun.com ကိုရီးယားကား f4မင်းသမီး ကူဟီးဆန်ရဲ့ site
» www.koreanfilm.org ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကမင်းသား၊မင်းးသမီး
» www.fashion-online.com နောက်ဆုံးပေါ်ကိုရီးယားဖက်ရှင်တွေသိနိုင်တဲ့ဆိုက်
» www.lwinmoe.com သရုပ်ဆောင်လွင်မိုးရဲ့ဝက်ဆိုက်
» www.htunaeindrabo.asia ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့ဝက်ဆိုက်
» www. Luckypalacevideo.com မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဝက်ဆိုက်
» www.kidzui.com ကလေးများအတွက်ဝက်ဆိုက်တစ်ခု
» www. Naditunlinastrology.com ဗေဒင်မေးလို့ရတဲ့မြန်မာဝက်ဆိုက်တစ်ခု
» www. Luckybusinessmyanmar.com မြန်မာ့နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» www.Bornchildmyanmar.com ကလေးများမွေးဖွားချိန်တွက်ချက်နိုင်သောဝက်ဆိုက်
» www.-Free.tarot.reading.net တားရော့ဗေဒင်အဟောကြည့်နိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
Posted by masterpieces at 12:06 AM